၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ချင်းပြည်နယ်မှ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ – Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ချင်းပြည်နယ်မှ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ချင်းပြည်နယ်မှ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
By Editor on	 June 15, 2020 Headline
လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်ပမယ့် ရက်အတိအကျကို တရားဝင်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ယခင်လျာထားချက်အတိုင်း နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပသွားမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ သူတို့ပါတီကိုယ်စား ပြုအနေနဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေအသီးသီးမှာ ၀င်ရောက်အရွေးခံကြမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွေ စတင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (NLD) ပါတီကတော့ မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်စီမှာ NLD မြိုမိမြိုဖ (၅) ဦးစီရွေးချယ်ပြီးတော့ အဲဒီမြို့မိမြိုဖများနှင့် မြို့နယ်ပါတီ EC တွေက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ၀င်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ NLD ပါတီကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အပြီးသတ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးမှ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. Dr. Aye Aye Ngun (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
2. Pu Ngun Vung (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
3. Pu Tial Ling (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
4. Pu Zo Bawi (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁) လက်ရှိ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ
5. Pu Sui Thio (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
1. Pu Zung Hlei Thang (အမျိူးသားလွှတ်တော်) လက်ရှိအမျိူးသားလွှတ်တော်အမတ်
2. Pu Riang Vel (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) လက်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်
3. Salai Lian Luai (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁) လက်ရှိဝန်ကြီးချူပ်
4. Pu Ral Hnin (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်
1. Pu Hang Khan Lian (အမျိူးသားလွှတ်တော် )
2. Pu Thang Do Cin (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
3. Pu Piang Suan Mung (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
4. Pu Thang Tuan Pau (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
5. Pu Mang Hin Dal (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိ စိုက်/မွေး/သစ်တောဝန်ကြီး
1. U Ngai Tam Om (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
2. U Nay Lin Aung (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်
3. U Aung Tan (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁) လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်
4. U Hung Nai (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂)
1. Pu Van Ni (Vahnei) (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
2. Mai Then Dik (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
3. Pu Thang Cin (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
4. Pu Vui Kaw (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး
1. Pu Henry Van Thio (အမျိူးသားလွှတ်တော်) လက်ရှိနိုင်ငံတော် ဒု-သမ္မတ
2. Pu C. Za Cung (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
3. Pu Chan Ham (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
4. Pi Ni Sui Lian (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂)
1. Pu Suan Mang (အမျိူးသားလွှတ်တော်)
2. Pu Suan Kap (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
3. Pu Kam Khen Mang (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
4. Pu Thang Suan Zam @ Sia Zamno (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂)
1. Daw Khin Shwe Lwin (အမျိူးသားလွှတ်တော်) လက်ရှိ အမျိူးသားလွှတ်တော်အမတ်
2. Daw Khin San Myint (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
3. U Kee Aung (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁)
4. ဦးဖွေအား (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး
1. ဦးပြေမင်း (အမျိူးသားလွှတ်တော်) လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်
2. ဦးဝှေ့တင်း (အမျိူးသားလွှတ်တော်) လက်ရှိအမျိူးသားလွှတ်တော်အမတ်
3. ဦးအောင်ရွှေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
4. ဦးစိုးထက် (ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၁) လက်ရှိစည်ပင်ဝန်ကြီး
5. ဦးမျိူးထိုက်(ပြည်နယ်လွှတ်တော် – ၂) လက်ရှိ အမျိူးသားလွှတ်တော်အမတ်
လာမယျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကငျြပမယျ့ ရကျအတိအကကြို တရားဝငျကွညောခွငျးမရှိသေးပမေယျ့ ယခငျလြာထားခကျြအတိုငျး နိုဝငျဘာလအတှငျး ကငျြးပသှားမယျလို့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှဟော သူတို့ပါတီကိုယျစား ပွုအနနေဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွအေသီးသီးမှာ ဝငျရောကျအရှေးခံကွမယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးရှေးခယျြမှုတှေ စတငျနကွေပွီ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအနိုငျရပါတီဖွဈတဲ့ အမြိူးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ (NLD) ပါတီကတော့ မွို့နယျတဈမွို့နယျစီမှာ NLD မွိုမိမွိုဖ (၅) ဦးစီရှေးခယျြပွီးတော့ အဲဒီမွို့မိမွိုဖမြားနှငျ့ မွို့နယျပါတီ EC တှကေ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ NLD ကိုယျစားပွုအနဖွေငျ့ ဝငျပွိုငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျ လောငျးတှကေို ရှေးခယျြခဲ့ကွပွီး ခငျြးပွညျနယျမှာတော့ NLD ပါတီကိုယျစားပွုအနဖွေငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို အပွီးသတျရှေးခယျြလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
ခငျြးပွညျနယျမွို့နယျအသီးသီးမှ NLD လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ ရှေးခယျြခံရတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှမှော အောကျပါအတိုငျးဖွဈသညျ။
1. Dr. Aye Aye Ngun (အမြိူးသားလှတျတျော)
2. Pu Ngun Vung (အမြိူးသားလှတျတျော)
3. Pu Tial Ling (ပွညျသူ့လှတျတျော)
4. Pu Zo Bawi (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁) လကျရှိ လှတျတျောဥက်ကဌ
5. Pu Sui Thio (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးဝနျကွီး
1. Pu Zung Hlei Thang (အမြိူးသားလှတျတျော) လကျရှိအမြိူးသားလှတျတျောအမတျ
2. Pu Riang Vel (ပွညျသူ့လှတျတျော) လကျရှိ ပွညျသူ့လှတျတျောအမတျ
3. Salai Lian Luai (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁) လကျရှိဝနျကွီးခြူပျ
4. Pu Ral Hnin (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိပွညျနယျလှတျတျောအမတျ
1. Pu Hang Khan Lian (အမြိူးသားလှတျတျော )
2. Pu Thang Do Cin (အမြိူးသားလှတျတျော)
3. Pu Piang Suan Mung (ပွညျသူ့လှတျတျော)
4. Pu Thang Tuan Pau (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁)
5. Pu Mang Hin Dal (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိ စိုကျ/မှေး/သဈတောဝနျကွီး
1. U Ngai Tam Om (အမြိူးသားလှတျတျော)
2. U Nay Lin Aung (ပွညျသူ့လှတျတျော) လကျရှိပွညျသူ့လှတျတျောအမတျ
3. U Aung Tan (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁) လကျရှိ ပွညျနယျလှတျတျောအမတျ
4. U Hung Nai (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂)
1. Pu Van Ni (Vahnei) (အမြိူးသားလှတျတျော)
2. Mai Then Dik (ပွညျသူ့လှတျတျော)
3. Pu Thang Cin (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁)
4. Pu Vui Kaw (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး
1. Pu Henry Van Thio (အမြိူးသားလှတျတျော) လကျရှိနိုငျငံတျော ဒု-သမ်မတ
2. Pu C. Za Cung (ပွညျသူ့လှတျတျော)
3. Pu Chan Ham (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁)
4. Pi Ni Sui Lian (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂)
1. Pu Suan Mang (အမြိူးသားလှတျတျော)
2. Pu Suan Kap (ပွညျသူ့လှတျတျော)
3. Pu Kam Khen Mang (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁)
4. Pu Thang Suan Zam @ Sia Zamno (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂)
1. Daw Khin Shwe Lwin (အမြိူးသားလှတျတျော) လကျရှိ အမြိူးသားလှတျတျောအမတျ
2. Daw Khin San Myint (ပွညျသူ့လှတျတျော)
3. U Kee Aung (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁)
4. ဦးဖှအေား (ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး
1. ဦးပွမေငျး (အမြိူးသားလှတျတျော) လကျရှိ ပွညျနယျလှတျတျောအမတျ
2. ဦးဝှတေ့ငျး (အမြိူးသားလှတျတျော) လကျရှိအမြိူးသားလှတျတျောအမတျ
3. ဦးအောငျရှေ (ပွညျသူ့လှတျတျော)
4. ဦးစိုးထကျ (ပွညျနယျလှတျတျော – ၁) လကျရှိစညျပငျဝနျကွီး
5. ဦးမြိူးထိုကျ(ပွညျနယျလှတျတျော – ၂) လကျရှိ အမြိူးသားလှတျတျောအမတျ